XASUUQA SOOMAALIYA/MUQDISHO KA SOCDA. | Wargeyska Xog-Ogaal
XASUUQA SOOMAALIYA/MUQDISHO KA SOCDA.
Magaala-madaxda soomaaliya ee Muqdisho waxaa ku sugan 20,000 ilaa 25,000 oo ah Jabhada TPLF ee qabiilka Melez Zanawi. Jabhadan oo si bareer ah, oo aan gambasho laheyn xasuuq balaaran uga wada caasimada dalka soomaaliya ee Muqdisho.
Taasoo keentay inay maanta buux dhaafeen Cisbitaaladii oo dhan, kadib markii ciidanka Jabhada TPLF ee ku soo duulay dalka xasuuqana ka wada soomaaliya si naxariix daro ah ay madaafiic ugu harqiyeen suuqa weyn ee Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho maalintii sabtida ee ay taariikhdu aheyd 28-March-08. Arintaan oo ka dambeysay markii uu si dhuumasho ah dalka soomaaliya ku soo galay ninka arimaha dibada ugu qaybsan qabhada Melez ee wadanka Xabashida.
Xasuuqa dadka soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dadka Muqdisho ku dhaqan loo gaystay waxaa mas’uuliyada ugu horeysa iska leh ..Taliyaha jabhada TPLF duulaanka Soomaaliya ku soo qaadey ee la yiraahdo Gabre (Gabar)…iyo Aabaha daba-dhilifyada soomaaliyeed A/laahi YEEY. Maanta haddii ay wax yar oo cadli ah aduunkaan ku hareen waa in lasoo taago maxkamad dambiilayaashaas xasuuqa u gaystay shacabka soomaaliyeed..
Hadaba si looga baxo duligaan iyo xasuuqaan. Dadka soomaaliyeed meelkastoo ay joogaan waa inay iscafiyaan, iskuna gargaaraan maanta waxay taagan tahay yaa maali jirey !
Waa in loo guntadaa sidii wadanka looga xoreyn lahaa Jabhadaha Tigreega ee dalka iyo dadka soomaaliyeed ku soo duuley, iyo waliba dagaal-oogayaasha isku soo qaawiiyey inay u adeegaan gumeystaha .
Guushu way soo dhow dahay ee yaan laga miyad jabin, waxka wayn qaranimo iyo xoriyad oo la raadiyaa ma jiraan .
This entry was posted in Wararka Dalka on 04/02/2008 by Abdirasak.
← XABASHKA YAA KEENAY XAMAR/DALKA? GANACSIGA SOOMAALIDA MN USA. →